Wasiirka Duulista oo xadhiga ka jaray mashaariic laga hirgeliyay madaarka Burco | Salaan Media
Home Wararka Wasiirka Duulista oo xadhiga ka jaray mashaariic laga hirgeliyay madaarka Burco
Wasiirka Duulista oo xadhiga ka jaray mashaariic laga hirgeliyay madaarka Burco
March 29th, 2013 Comments Off
Burco (SM)- Wasiirka Wasaaradda Duulista iyo Hawada Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo ay weheliyaan maamulaha madaarka Burco Cabdilaahi Yuusuf Axmed ayaa maanta xadhiga ka jaray mashaariic cusub oo lagu kordhiyay madaarka.
Mashaariicdan cusub ee lagu kordhiyay madaarka Burco oo ah shan mashruuc ayaa ah xafiisyo cusub oo uu yeelan doono madaarku, kuwaasoo lagu sameeyay dibu habayn casri ah, qalabka lagu ogaado diyaradaha ku soo fool-leh madaarka iyo waliba raadyaw lagula xidhiidhi karo diyaarad kasta oo hawada maraysa, saldhig boolis oo laga hir-galin doono gudaha madaarka iyo waliba siliig lagu soo wareejin doono qaybta dambe ee madaarka Burco.
Dibu-dhiskan balaadhan ee muddooyinkii u dambeeyay ka socday madaarka Burco ayaa wakhtigan maraya gabo-gabo waxaanu guud ahaanba isbedel balaadhan oo dhinaca muuqaalka ahi ku yimi madaarka.
Xadhig ka jarista mashaariicda cusub ayaa ugu horaynba waxa ka hadlay Wasiirka Wasaaradda Duulista iyo Hawada Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi, waxaanu faahfaahin ka bixiyay hawlaha dibu dhis ee ka socda madaarka, isagoo wasiirku tilmaamay inuu wakhtigan uu madaarka Burco yahay mid la tartamaya madaarada kale ee dalka.
Wasiirka Wasaaradda Duulista iyo Hawada Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa shaaca ka qaaday in wakhtiga xagaaga ay qurba-jooga reer s/land si toosa uga soo degi-donaan madarkaasi.
Xildhibaan Cali mareexaan oo ka mid ah mudanayasha Golaha Wakiilada Somaliland iyo Guddoomiyaha Gobalka Togdheer Axmed Cumer X. Cabdilaahi (Xamarji) oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa guddida dibu dhiska madaarkaas ku booriyay in aanay ka caajisin ka shaqaynta hawlaha dibu dhiska madaarka.
waxaanay ugu baaqeen qurba-jooga reer Somaliland inay ka qayb qaataan dibu dhiska madaarka burco.
Ugu dambayntii waftigani balaadhan ee uu horkacayo Wasiirka Duulista iyo Hawada Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi iyo maamulaha madaarka Burco Cabdilaahi Yuusuf Axmed ayaa kormeer indho indhayn ah ku soo maray gegada ay ka haadaan diyaraduhu.